I-Biographie kaSara Boone: Ibhodi ePhuthukisayo yokuThuthukiswa
Ukuphuculwa kweBhodi yokuNyusa
Ukuba uke wazama ukutshintsha i-shirt, unokuqonda ukuba kunzima kangakanani ukutshintsha iimpahla. Umgqoki wezinto zokugqoka uSarah Boone wajongana nale ngxaki waza waqulunqa ukuphucula ebhodini lokunyonga ngo-1892 okwakwenza kube lula ukunyathela imikhono ngaphandle kokungenisa izinto ezingafunekiyo. Wayengomnye wabasetyhini bokuqala abamnyama ukufumana ilungelo lobunikazi e-United States.
Ubomi bukaSara Boone, Inventor
USara Boone waqala ubomi njengoSara Marshall, owazalwa ngowe-1832.
Ngo-1847, eneminyaka eyi-15 ubudala, watshata nomkhululi uJames Boone eNew Bern, eNorth Carolina. Bathuthela enyakatho ukuya eNew Haven, eConnecks ngaphambi kweMfazwe yombutho. Wayesebenza njengomgcini wengubo ngelixa wayesitena. Babenabantwana abasibhozo. Wahlala eNew Haven ubomi bakhe bonke. Wafa ngo-1904 waza wangcwatyelwa e-Evergreen Emangcwabeni.
Wafaka i-patent yakhe ngoJulayi 23, 1891, echaza iNew Haven, Connecticut njengekhaya lakhe. I-patent yakhe yashicilelwe iinyanga ezilisithoba emva koko. Akukho ndawo ekhoyo efunyenwe ngayo ukuba ingeniso yakhe yaveliswa kwaye yathengiswa.
Ibhodi leNdawo yokuThengisa uSara Boone
Ilungelo lobunikazi beBoone alingekona lokuqala kwibhodi yokunxilisa, nangona oko ungakubona kwezinye izihlomelo zabasunguli kunye nezinto zokusebenza. Iifolda zamatye e-ironing ezinokubonakalayo zibonakala kwi-1860s. Ukutshintshwa kweentsimbi kwenziwe ngeentsimbi ezitshiswayo kwisitofu okanye ngomlilo, usebenzisa itafile ehlanganiswe ngendwangu ebanzi. Ngokuqhelekileyo amabhinqa ayeza kusebenzisa itafile ekhitshini, okanye aqhube ibhodi kwiitulo ezimbini.
Ukufakela ukutyelela kwakuza kwenziwa kwikhitshi apho izitenxo zingatshiswa kwisitofu. Iimpawu zombane zazinelungelo lobunikazi ngo-1880 kodwa azizange zithintele kude kube emva kwexesha leminyaka.
USara Boone wabonisa ukuba uphuculo lwebhodi yokubumba (i-US Patent # 473,653) ngo-Ephreli 26, 1892. Ibhodi yokunyusela iBoone yenzelwe ukuba isebenze ekusebenziseni iimpahla kunye neembumba zeengubo zamantombazana.
Ibhodi yeBoone yayincinci kwaye ivalwe, ubukhulu kunye nokulungeleka komkhono oqhelekileyo kwiingubo zabafazi belo xesha. Kwaye kwaguqulwa, okwenza kube lula ukuyifaka emacaleni omabini omkhono. Uye wachaza ukuba ibhodi inokuveliswa isicatshulwa kunokuba ivalwe, nto leyo ingaba ngcono ekunqunywe kwemikhono yamadoda. Wayephawula ukuba ibhodi yakhe yokubamba i-ironing nayo iya kuba yinto efanelekileyo yokutshiza iinqwelwana ezinqeni.
Ukuqulunqa kwakhe kuya kuba kukulungele ukufumana iimpahla zokunyamezela namhlanje. Ibhodi yokutshiza i-ironing yokusetyenziswa kwekhaya inomphetho onokubangela ukuba uncedo ekunyanzeliseni intsimbi yezinto ezithile, kodwa imikhono kunye nemilenze yokuphosa ihlala ikhohlisayo. Abantu abaninzi banokuyityelela i-flat and crease. Ukuba awufuni i-crease, kufuneka ugweme ukugxina phezu komgca osiweyo.
Ukufumana ukugcinwa kwebhodi ye-ironing yekhaya kuyakuba ngumngeni xa uhlala kwindawo encinane, ii-boarding ironing isisombululo esisodwa esilula ukufaka kwiikhabhinethi. Ibhodi ye-ironing ironing ikhangeleka njengekhetho ongakhetha kuyo ukuba unake iipati ezininzi kunye neebhulukhwe kwaye ungathandi i-creases.
UCharles Proteus Steinmetz (1865-1923)
Iimvelaphi eziziwayo ezivela eNew Mexico
Amaphondo namaKhansela aseCanada
Indlela Yokuvakalisa Ukwesaba ngeSpanish
Ukumisa i-Altare yakho ye-Imbolc
Yintoni eyahlukileyo phakathi koxhomekekileyo kunye noxhomekeke kuyo